Ikhwelo eliNgxamisekileyo le-WTN lokuba amazwe e-OECD abuyekeze uShishino loKhenketho lwaseAfrika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ikhwelo eliNgxamisekileyo le-WTN lokuba amazwe e-OECD abuyekeze uShishino loKhenketho lwaseAfrika
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
UMbutho weNtsebenziswano yoQoqosho noPhuhliso (OECD) ngumbutho wamazwe ngamazwe osebenzela ukwakha imigaqo-nkqubo engcono ubomi obungcono. Injongo kukubumba imigaqo-nkqubo ekhuthaza impumelelo, ukulingana, amathuba, kunye nokuphila kakuhle komntu wonke.
Kunye noorhulumente, abenzi bomgaqo-nkqubo, kunye nabemi, i-OECD isebenza ekusekeni imigangatho yamazwe ngamazwe esekelwe kubungqina kunye nokufumana izisombululo kuluhlu lweengxaki zentlalo, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo. Ukusuka ekuphuculeni ukusebenza kwezoqoqosho nokudala imisebenzi, ukuya ekukhuthazeni imfundo eyomeleleyo kunye nokulwa nokuphepha irhafu kumazwe ngamazwe, i-OECD ibonelela ngeqonga elikhethekileyo kunye nolwazi lweziko ledatha kunye nohlalutyo, ukutshintshiselana ngamava, ukwabelana ngolwazi olungcono, kunye neengcebiso malunga nemigaqo-nkqubo yoluntu kunye nokumisela umgangatho wamazwe ngamazwe. .
I-OECD isembindini wentsebenziswano yamazwe ngamazwe. Amazwe angamalungu asebenza namanye amazwe, imibutho, kunye nabachaphazelekayo kwihlabathi jikelele ukujongana nemingeni ecinezelayo yemigaqo-nkqubo yangoku.
UMbutho weNtsebenziswano yezoQoqosho noPhuhliso ngumbutho wezoqoqosho kurhulumente onamazwe angamalungu angama-38, owasekwa ngo-1961 ukuvuselela inkqubela-phambili yezoqoqosho kunye norhwebo lwehlabathi.
La mazwe alandelayo ngamalungu akhoyo ngoku e-OECD:
OSTRELIYA 7 Juni 1971
OSTRIYA 29 Septemba 1961
BHELJIYAM 13 Septemba 1961
KHANADA 10 April 1961
TSHILE 7 May 2010
KHOLAMBIYA 28 April 2020
ICOSTA RICA 25 May 2021
UMPHAKATHI WASECZECH 21 Disemba 1995
DOMINIKHA 30 May 1961
ESTONIYA 9 Disemba 2010
FINLEND 28 January 1969
FRANSI 7 Agasti 1961
JEMANI 27 Septemba 1961
GRISI 27 Septemba 1961
HANGARI 7 May 1996
AYISILEND 5 Juni 1961
AYALEND 17 Agasti 1961
SIRAYELI 7 Septemba 2010
ELAMATALIYANE 29 Matshi 1962
JAPHAN 28 April 1964
KOREA 12 Disemba 1996
LATHVIYA 1 Julayi 2016
LITHUWANIYA 5 Julayi 2018
LAKSEMBHEG 7 Disemba 1961
MEKHSIKHO 18 May 1994
ELAMADATSHI 13 Novemba 1961
I-NEW ZEALAND 29 May 1973
NOROWE 4 Julayi 1961
PHOLEND 22 Novemba 1996
PHOTSHUGO 4 Agasti 1961
SLOVAK REPUBLIC 14 Disemba 2000
SLOVENIYA 21 Julayi 2010
SPEYIN 3 Agasti 1961
SWIDEN 28 Septemba 1961
SWIZALEND 28 Septemba 1961
IKARIKUNI 2 Agasti 1961
IUNITED KINGDOM 2 May 1961
EUNITED STATES 12 April 1961
Usihlalo webhodi yezoKhenketho e-Afrika uCuthbert Ncube ubhale kumbutho kaWhatsApp izolo:
Molweni Mawethu. Sithandazela ukuba siphile kakuhle ngobabalo lwakhe. Siphawule ngokudana nokulicaphukela inyathelo leYurophu kunye nabanye lokubeka iAfrika yodwa. Kudala kulindelekile njengoko besisoloko sivakalisa ukulingana obekusenziwa amashumi eminyaka. Ukuba bekukho ixesha lokuba sonke simanyane, lixesha ngoku lokuba i-Afrika ihlanganise yonke imizamo yethu ukuze siphucule uluntu kunye nabemi bethu.
Iimpendulo koku ziquka amabinzana: Intlonipho Mnu. Sihlalo, kufuneka siphakame kwaye sime kwaye sikhusele ilizwekazi lethu.
Oku kuphendulwe nguNjingalwazi uGeoffrey Lipman weSunX eBrussels:
Bahlobo abathandekayo baseAfrika: Ndicebisa isidingo sokusondela kule nyani ye-Omicron entsha ngengqiqo ezolileyo, hayi nje imvakalelo eqondakalayo.
Kuxelwe ukuba bebengama-60 abakhweli abosulelekileyo kwinqwelomoya yeKLM esuka eKapa isiya eAmsterdam kule veki. Olu hlobo olutsha lusenokungaluvumeli ukhuseleko lwangoku logonyo. Oku kuyavavanywa kwaye yimihla yokuqala kuloo nkqubo. Ayiphumi kuyo nayiphi na imvakalelo echasene neAfrika ukuba abasemagunyeni baseYurophu bazame ukuvala umsantsa. Kungenxa yokuba inokuba ngumsantsa obulalayo kwizicwangciso zabo ezisisiseko zokukhusela abemi.
Sikunye kufuneka siphembelele uluntu lwaMazwe ngaMazwe (kuquka amashishini ezezimali kunye ne-inshorensi) ukuba iNgxowa-mali yeMbuyekezo yezoKhenketho inkulu ukuze ihlawulele oku kunye neziganeko ezisongela impilo zokhenketho eziqhutywa kwixesha elizayo.
UWolfgang Koening waseJamani wongeze wathi:
Kwaye sekulixesha elide ukulahla amalungelo awodwa omenzi wechiza ukunika bonke abantu base-Afrika ithuba lokugonywa kunye nokuthintela ukwahluka okutsha ukuba kuvele.
I-Kalo Africa Media yaseNigeria ibhale:
Thetha ngokuchasene nokubhala okungalunganga kunokuba ucinge ukuba akuyomfuneko. Kufuneka sithethe!
Ucinga ukuba uya kuhlala engathethi kwaye abukele ilizwe lakhe libhalwe ngokungalunganga? Sithetha ngommandla woMzantsi Afrika wonke. Ayihlekisi. Ucinga ukuba iChina ifumene lula? Kule meko, bekungekho bungqina bubambekayo bokumisela imvelaphi ye-OMICRON, kodwa bagqibe kwelokuba yiAfrika. Ucinga ukuba iBotswana yayifumana ilula xa yathiywa okokuqala igama elahlukileyo laseBotswana? Sonke kufuneka sithethe; luhlaselo oluhlangeneyo oluchasene noluntu.
Ilungu le-ATB elivela eZambia labhala:
Akukho baphumeleleyo ekuvaleni imida. Yimeko yokulahlekelwa / yokulahlekelwa kwabo bavala imida kunye nabachatshazelwa kukuvalwa. Indlela yenkqubela phambili kukunyanzelisa nokomeleza amanyathelo akhoyo okujongana nokusasazeka kwe-COVID.
UFaouzou Deme waseSenegal wongeze:
Molo: Lo bhubhani yimfazwe ebandayo yoosomashishini abakhulu kunye namagunya amakhulu aseYurophu naseMelika ukuze babhubhise iAfrika ngenxa yeminqweno yabo. Kuxhomekeke kuthi ukuba sicinge kwaye silungiselele iforam yokuvuselela ukhenketho lwase-Afrika (ummandla ongaphantsi) kwindlela yethu yokusebenzisa iimveliso zabakhenkethi kubantu basekhaya kwicandelo ledijithali kunye nabanye. Esi sisindululo sam sobuqu. Ingaba ucinga ntoni?
Umongameli uCyril Ramaphosa woMzantsi Afrika uthe izolo:
Kangangexesha elide, amazwe aseAfrika aye aqeqeshelwa ukujonga amathuba orhwebo notyalo-mali kwiimarike ezingaphaya kwelizwekazi, njengeYurophu, iAsia, noMntla Merika. Lixesha lokuba ugxininiso lube kufutshane nekhaya.
Uthungelwano loKhenketho lweHlabathi lundulule:
Ngenxa yokuba uhlobo lwe-Omicron lwe-COVID-19 ichongiwe zizazinzulu zophando eziphezulu eMzantsi Afrika, kwaye ilizwe lazisa ngoko nangoko uMbutho wezeMpilo weHlabathi kunye neBhunga lezeMpilo leHlabathi, lisebenzisa iinkqubo ekuvunyelwene ngazo kwihlabathi liphela, kubalulekile ukuba unganikeli luvo lokuba. ilizwe elenza oko kulindelekileyo kubo phantsi kwesivumelwano samazwe ngamazwe, kuthetha ukuba kufuneka babhalwe kakubi njengelizwe, kwaye bangohlwayi elo lizwe ngokubekwa bodwa; kwaye
Ngenxa yokuba i-WHO ichaze ngokusemthethweni ukuba iZithintelo zokuhamba aziyi kunceda ukunqanda ukusasazeka kwale ntsholongwane; kwaye
Ngenxa yokuba ngaphandle kweli cebiso, oorhulumente abaninzi be-OECD baye babeka izithintelo zokuhamba ezilolo hlobo kumazwe akuMzantsi Afrika.
Ngenxa yokuba oku kube nefuthe eliqhubekayo elilinganisekayo lezemali kwicandelo lezoHambo noKhenketho kula mazwe akuMazantsi e-Afrika ngoko ke iimeko zawo zentlalo noqoqosho kunye nophuhliso,
I-World Tourism Network icela amazwe anoxanduva lwe-OECD ukuba aseke iNgxowa-mali yaMazwe ngaMazwe ukuze kubuyekezwe icandelo lezoKhenketho noKhenketho kula mazwe ase-Afrika, njengoko kungqinwe yiBhanki yoPhuhliso yase-Afrika, nokugcina loo ngxowa-mali ikwimigangatho efunekayo de oko kuvalwa kupheliswe.
Ngelishwa, okwenzeke ngempelaveki, kukhangeleka ngathi uMzantsi Afrika neBotswana zibhaliwe.
Okwangoku, siyazi ukuba uhlobo olutsha lwalusele luseBelgium, eJamani, e-UK, eCanada, naseHong Kong, kwaye lusendleleni. IJapan kunye no-Israyeli bavala imida yabo kubo bonke abantu basemzini. Oku kungaphaya koMzantsi Afrika.
Into yokuba i-Afrika ingenazo iindlela zokugonya wonke umntu inokuba negalelo kutshintsho olutsha lwentsholongwane. IWorld Tourism Network ibicele izikhokelo ezitsha malunga nendlela yokuhamba ne-COVID-19 kwaye ugcine imida kunye noqoqosho luvulekile.
Oku kube nefuthe eliqhubekayo elilinganisekayo lezemali kwicandelo loHambo noKhenketho kula mazwe akuMazantsi e-Afrika ngoko ke iimeko zawo zentlalo noqoqosho kunye nophuhliso.
Namhlanje, i-WTN ifumene iminxeba evela kumazwe ase-Afrika ebengafanelanga ukuba ichatshazelwe luxinzelelo olutsha. Umsebenzisi wabakhenkethi e-Uganda uxelele i-WTN ukuba bafumene ukurhoxiswa okukhulu kubakhenkethi base-US. Kubonakala ngathi yonke iAfrika ibhaliwe ngoku, kwaye oku akuyi kuphelela apha.
Isicelo cofa apha
I-World Tourism Network imemelela ukuba kusekwe iNgxowa-mali ngamaZwe e-OECD
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ke ngoko, icela inkxaso yecandelo lezoKhenketho eliseMazantsi e-Afrika elichatshazelwa ngokuthe ngqo ngenxa yemilinganiselo yamazwe athile e-OECD yokuyekwa ngokulinganayo kweenkonzo zomoya ekuvunyelwene ngazo macala omabini.
I-WTN icebisa ukuba iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ishukuxe lo mba naBaphathiswa bezoKhenketho base-Afrika, kunye neeNtloko zamazwe ase-Afrika, kunye ne-EU, i-US, i-UK, kunye ne-Japan.
UThungelwano loKhenketho lweHlabathi luza kuxhasa ikhwelo lokubuyekeza icandelo lezoKhenketho noKhenketho kula mazwe ase-Afrika, njengoko kungqinwe yiBhanki yoPhuhliso yase-Afrika. I-WTN ihlaba ikhwelo lokuba kugcinwe iNgxowa-mali yeMbuyekezo yoKhenketho kumanqanaba ayimfuneko de kube kupheliswe oko kuvalwa.